Ny iray ampahatelon’ny sekoly maneran-tany no tsy manana toerana azon’ny mpianatra hanasana tanana, ary mety ho ny antsasaky ny sekoly mihitsy aza izany, any amin’ny firenena tena mahantra, toa antsika. Na ny toeram-pitsaboana koa aza dia voakasik’izany tsy fisiana na tsy fahampian’ny fotodrafitrasa fidiovana izany. Mitaha amin’ny 16% izany, amin’ny ankapobeny, maneran-tany. Ao anatin’izao vanim-potoana mampihotakotaka, vokatry ny fiparitahan’ny otrikaretina « coronavirus » izao anefa, dia vao mainka tena zava-dehibe sy manan-danaja ny fanasana tanana amin’ny rano sy ny savony. Io mantsy no fomba tsotra indrindra sy tsy mandany vola indrindra azo atao, hisorohana ny fiparitahan’ity valanaretina ity. « Tsy vahaolana mahagaga akory izany, hoy Atoa Sanjay Wijesekera, Tale eo anivon’ny UNICEF, misahana ny momba ny rano, ny fahadiovana sy ny fidiovana, saingy ilaina ny mampahafantatra ny besinimaro mikasika an’ireo fepetra azony raisina, hiarovany tena sy hiarovany ny fianakaviany ». Ny mponina an-tanàn-dehibe moa no azo lazaina ho marefo indrindra, manoloana ny « coronavirus », noho ny habetsaky ny fivezivezen’ny olona sy ny fifampikasohana. Antony ilàna matetika ny fanasan-tanana izany, mialohan’ny sakafo, rehefa avy any amin’ny toeram-pivoahana, rehefa avy nikasika fitaovana iraisan’ny besinimaro ary rehefa avy nandeha fiara fitateram-bahoaka.